Falastiiniyiin lagu dilay Isreal - BBC News Somali
Falastiiniyiin lagu dilay Isreal
3 Falastiini ah ayey booliska Israel ku dileen magaalada Jersulema kaddib markii si toos ah u toogteen bas.
Weeraradan ayaa ka mid ah kuwii ugu dambeeyay kuwa taxane ah, oo ku soo aaday booqashada madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Joe Biden.
Wuxuu kulan la leeyahay hoggaamiyayaasha Israel iyo Falastiin.
Sida ay sheegayaan booliska Israa’il, laba nin oo hubeysan oo u dhashay Falastiin, ayaa rasaas ku furay gaari bas ah ka hor inta aysan gelin magaalada qadiimiga ah ee Quddus, halkaa oo markii dambe nin askari ah uu ku toogtay.
Daanta galbeed, ayaa sidoo kale lagu toogtay nin Falastiini ah kaddib markii uu isku dayayay in uu tooreeyo askari israaili ah, oo joogay bar koontarool oo ku taal meel u dhow Qalqiliya.
Weeraradan ayaa daba socday dhowr weerar oo dahacay shalay, oo uu ka mid ahaa mid ka dhacay Jaffa oo lagu dilay dalxiise u dhashay Maraykanka, iyada oo goordhow uu Israa’il uu gaaray madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Joe Biden
Mar uu hadlay kaddib kullankii uu la yeeshay ra’iisul wasaare , Benjamin Netanyahu, ayaa Mr Biden waxa uu sheegay in xaq aan lagu tilmaami karin rabshadahan aadka u xun.
Waxa uuna dhaleeceeyay dadka aanan cambaareyn falkan.
Mr Netanyahu's, ayaa isaga oo ku celcelinaya waxa uu ku eedeeyay hoggaanka Falastiin in ay kiciyeen arrimahan, Falastiiniyiinta ayaa dhankooda sheegay in siyaasadda Israa’iil in ay dhiiragelisay weeraradan.